Badminton: nanjaka ny Baobad sy ny klioban’Itaosy | NewsMada
Badminton: nanjaka ny Baobad sy ny klioban’Itaosy
Par Taratra sur 10/12/2018
Notanterahina, ny asabotsy 8 desambra sy omaly alahady 9 desambra, ny lalao fiadiana ny tompondaka nasionaly, sokajy “seniors”, taranja badminton. Samy niezaka nanome ny tsara ireo mpandray anjara rehetra, saingy tena nanjaka ny klioban’ny Baobad sy ny avy amin’ny lisea Saint Michel Itaosy. Raha atao mantsy ny kajy, medaly volamena miisa telo avy ny azon’ireto klioba roa ireto nandritra ity fifaninanana ity.
Tompondakan’i Madagasikara lehilahy, sokajy A, i Haja Marc (Baobad), rehefa avy nandavo an-dRakotoarinaivo Herizo (ABC Antsirabe), tamin’ny seta 2 no ho 0. Ho an’ny sokajy B sy C kosa, tompondaka Randrianantenaina Sitraka (Baobad), 2 no ho 0; sy Ramanjakanoro Mialy (LSM Itaosy), seta 2 no ho 0.
Ho an’ny sokajy “vétérans” lehilahy kosa indray, nanamarika isa ambony Rakotomalala Zo nanoloana an-dRakotozafy Mon Claire ka nibata ny fandresena, tamin’ny seta 2 no ho 1.
Raha toa ka nanao pao-droa ry zareo avy ao amin’ny Baobad ho an’ny sokajy lehilahy, nanjaka kosa ny klioban’ny Saint Michel Itaosy, nandritra ny lalaon’ny vehivavy. Norombahin-dRazanamaly Ntsoaniaina sy Razafinimanana Miangola, avy amin’ny LSM Itaosy, mantsy ny amboara ho an’ny sokajy A sy C. Ramanandraisoa Sahondra (Baobad) kosa ny nahazo ny fandresena ho an’ny sokajy B, nanoloana an-dRasolomanana Voahangy, mpilalao avy amin’ny Baobad ihany. Amboara sy loka maro ny nozaraina ho an’ireo mpilalao mendrika, natolotry ny federasiona malagasy ny badminton.
Nihanitombo ny traikefan’ireo mpilalao tamin’ity lalao fiadiana ny tompondaka nasionaly 2018 ity, raha ny nambaran’ny mpitsara ny lalao sy ny mpikarakara izao fifaninanana izao. Manana hoavy mamiratra ary antenaina ny hivelaran’ny badminton eto Madagasikara, indrindra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Efa manao ezaka rahateo ny federasiona amin’ny fampitomboana ny traikefan’ny mpanazatra sy ny mpilalao amin’ny alalan’ny fanomezana fampiofanana azy ireo. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ho amin’ny taom-pilalaovana 2019 izany, raha ny fanazavana nentin’ny federasiona.